FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DOSA MASTIFF - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Dosa Mastiff
Dosa Mastiff Koreana olon-dehibe, sary natolotry ny The Mighty Dosa
Ny palitao Koreana Dosa Mastiff dia fohy, landy ary mamiratra. Ny loko dia misy sôkôla, mahogany ary mena. Patchy fotsy eo amin'ny tratra no azo atao.
Ny Dosa Mastiff Koreana dia mendri-kaja, mora mandeha tsara, manan-tsaina ary mahatoky. Tian'i Dosa ny miaraka amin'ny olona. Alao antoka fa an'ity alika ity ianao mpitarika fonosana , manome isan'andro fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana hialana fanahiana fisarahana . Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratrarana pack status . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra mazava ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Io goavambe malefaka io dia malala-toetra, mendri-kaja, mendri-kaja ary sariaka. Manjary 'miankina' amin'ireo olona tiany izy io. Izy io dia mahatonga alika am-paosy goavambe. Tena tsara miaraka amin'ny biby fiompy sy ankizy hafa. Natokana ho an'ny olon-tsy fantatra. Ilaina ny fanaraha-maso manodidina ny ankizy kely satria mety hanitsaka azy ireo tsy nahy izany na handondona azy ireo. Anarana serasera olombelona amin'ny canine tena ilaina.
Haavony: Lehilahy 25.5 - 30 santimetatra (64 - 76 cm) Vehivavy 23.5 - 27 santimetatra (59 - 68 cm)
Milanja: Lehilahy 160 - 185 pounds (72 - 84 kg) Vehivavy 145 - 165 pounds (65 - 74 kg)
shar pei afangaro bulldog
Maso serizy dia fahita amin'ny karazany ny tsy maintsy esorina fa tsy voafehitra. Ny sakafo tsara no zava-dehibe indrindra amin'ity karazany lehibe mitombo haingana ity. Izany dia mora mitsonika koa tokony homena sakafo kely 2 ka hatramin'ny 3 isan'andro. Mety hijaly koa noho ny dysplasia sy ny areti-maso toy ny Entropia io.
Mifanaraka amin'ny tontolon'ny tanàna sy ny firenena.
Haavo antonony antonony. Voatarika ho kamo. Ny alika kely dia tsy tokony homena fanatanjahan-tena mafy satria mbola miforona ny taolany. Fa kosa, alika kely dia tokony omena toerana malalaka hanaovana fanatanjahan-tena samirery. Toy ny alika rehetra, ny Dosa dia mila mandeha a mandeha isan'andro na jogging, mba hanatanterahana ny instincan'ny prine canine mandeha. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
7-12 taona eo ho eo
laboratoara boston terrier mifangaro alika kely alikaola
Mpanafatra maivana sy maivana. Borosio isan-kerinandro, mila fanadiovana isan-kerinandro ny valin'ny hoditra, ary fandroana isam-bolana amin'ny shampoo anti-bakteria.
Epoh-Nee ilay alika kely Koreana Dosa Mastiff tamin'ny faha-6 taonany, sary natolotr'i Redline Bordeaux
Epoh-Nee ilay alika kely Koreana Dosa Mastiff tamin'ny sary 6 volana nahazoana lalana avy tamin'i Redline Bordeaux
Aostraliana mpiandry sisin-collie Mix alika
mixer boxer bulldog amerikana fotsy
amboa miteraka cur mainty cur